Faah faahin: Macalin Dugsi Quraan oo lagu sumeeyay Beledweyne | Dhacdo
Faah faahin: Macalin Dugsi Quraan oo lagu sumeeyay Beledweyne
Wararka ka imaanaya Magaalada Beledweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in haweeney ka mid ah dadka deegaanka ay xalay magaaladaasi ku sumeysay saygeeda, ka dib markii uu khilaaf soo kala dhexgalay.
Marxuumka oo lagu magacaabi jiray Macalin Cumar Maxamuud Xalane, ahaana Macalin Dugsi Quraan ayaa la sheegay in xaaskiisa ay sunta ugu dartay caano.
Taliyaha Saldhigga Booliska Beledweyne, Maxamed Maxamuud Qoorsheel ayaa dhacdadan ka dhacday magaaladaasi ku tilmaamay mid aad u xanuun badan.
“Dhacdadan xalay Beledweyne ka dhacday dhacdo aad u xanuun badan ayay ahayd, macalin lagu magacaabo Macalin Cumar Maxamuud Xalane, Ina Xaliimo Xasan Fiidow 45 ah, ku dhashay, degana Beledweyne ayaa waxaa sun hagar la’aaneed ah ugu dartay caano marwadii uu isaga qabay oo lagu magacaabo Fa’isa Isaaq Faarax.” Ayuu yiri Taliyaha.
Taliyaha oo ka hadlayay sababta ay u dishay ayaa yiri “Marwada iyo isaga khilaaf ka dhex jiray awgeed ayay u dishay. Sababta waxaa weeye diidmo gabadha xageeda ah ayay sheegatay, taasaana keentay in sunta caanaha loogu daro.”
Taliyaha ayaa intaa ku daray in gacanta lagu soo dhigay haweeneydii falkaasi gaysatay, taasoo sida uu sheegay lagu hayo Saldhigga Booliska Beledweyne.
Dhacdadan ayaa noqotay midda ay ugu hadalhaynta badan yihiin dadka reer Beledweyne, gaar ahaan dadka degan xaafadda Xaawo Taako, oo dhacdadaasi ay ka dhacday.